SII AFEEF DHIGASHADA MADAXDA KULMIYE « SAWNEWS NETWORK
« War-Saxaafadeed: Madaxweyne Rayaale Oo Maanta Qasriga Madaxtooyada Ku Qaabilay Wefti Ka Socda Hay’adda Caafimaadka Aduunka Ee WHO.
Tacsi: Jaliyadda Awdal,Salal iyo Gabilay ee Dalka Switzerland »
SII AFEEF DHIGASHADA MADAXDA KULMIYE
Markaan is idhaahdo ha hadlinba wax iga hadashiiyaan arkaa!!!!
Khudbadaha, warbixinada, iyo digniinada ay madaxda Xisbiga Kulmiye ku baahinayaan warfaafinta wadanka iyo kuwa aduunkaba waxay tusayaan in madaxdaasi ayna daacad marnaba ka ahayn nabad, doorasho xasiloon u dhacda, iyo gooni isu taaga Somaliland.
Waxay madaxdaasi hadalhayn u leeyihiin; haddii doorasho xalaal ihi dhici waydo nabadi ma jiri doonto, wadankuna halisbuu gali doonaa, dagaal sokeeye waa lagama maarmaan. Haddaba haddii qodobadaas ay hadalhaynta u leeyihiin aan mid mid u qaadano oo falanqayno cidda sababi karta dhibaatooyin ku yimaada dalka iyo dadkaba, waxay ummadu garan doontaa waxa ay madaxda kulimye goor walba u afeef dhigtaan.
DOORASHO XALAAL AH
Madaxda Kulmiye waxay doorasha la’aanta ku eedeeyaan Xukuumada uu madaxa ka yahay Riyaale. Hase yeeshe e haddii aan dib u raacno dhacdooyinkii ka horeeyey Komishankan cusub waxa aanu murun ku jirin in madaxda kulimye ay maleegeen shirqooladii sababay dimashooyinkii fooshaxumaa ee ka dhacay wadanka. Dadweynaha badidiisu way ogyihiin in ay madaxda Kulimye iyagu u seeta dheereenyeen Xukuumada Riyaale. Sababtoo ah iyagay ahaayeen kuwii goor walba diidmada qayaxan miiska la fadhiyay ee diiday dhexdhexaadintii caalamka iyo dadweynaha. Iyagay ahaayeen kuwii u adeegaayey ee hirgelinaayey ujeedooyinkii Inter-Peace ay ka lahayd maalgelinta doorashada madaxweynaha. Dadweynuhu mar danbe ayey ogaadeen ajandaha ka danbeeyey diidmadii joogtada ahayd ee madaxda kulmiye.
Doorashada xalaasha ah ee maanta ay doonayaani waa tii mararkii horaba lagu karila’aa. Doorashada xalaashi ihi waxay dhacdaa marka tartan hufan oo wax hel iyo wax waaba tartamayaasho isku kalsoon yihiini. Inta madaxda kulmiye ay dowlada iyo komishanka doorashooyinka u hanjabayaan maxay iyagu isu waaninwaayeen oo ay isugu sheegi waayeen in doorashada xalaashi ihi iyaga gacantooda ku jirtu. Diiwaan gelintana iyaga ayaa mabdaiyanba uga soo horjeeday. Dhigihii ilaahay waansho iyaa waantooba. Haddii ay hanjabaada is daba jooga ah iyo cabsi gelinta ummada ay joojiyaan madaxdaasi doorasho xalaal ihi way dhici. Haddii kale oo ay siday sheegayaan ay ku dambayso iyaguna wax ku la’.
WADANKA HALISBAA KU SOO AADAN, DAGAL SOKEEYANA WAA LAGA MAARMAAN.
Madaxda Kulmiye waxay haldal hays u leeyihiin haddii doorasho xalaal ihi dhiciwaydo wadanku halisbuu gali doonaa. Waxay naawilayaan ee ay arkayaan waa waxay horeyba ugu tala jireen in ay dalka ka ridaan dagaalo sukeeye. In aano wadanku degin horeyna way u sheegeen haddana way inoo sheegayaan. Waa nasiib daro wayn in dadkii ka soo qayb galay halgankii horeynta Somaliland ay maanta gacantooda rabaan in ay ku dumiyaan. Madaxda kulmiye waxay isku halaynyaan iyo xooga ka danbeeyi muxuu yahay?
Siilaanyo markastaba wuxuu aaminsanyahay SHIR BEELEED. Sababtoo ah haddii doorasho xalaalihi dalka ka dacdo oo ku salaysan diiwwan gelinta cod bixiyayaasha waxa u ogyahay in aano helaynin doorashada. Waxa u daliil in uuna rabin doorasho xalaal shirkii Garadag ee qodobadii ka soo baxay qaarna la shaaciyey qaarna la qariyey. Qodob ka mid ah Qodabda Shirka lagu soo afjaray wuxu u dhignaa sidan: Shirku waxa uu walaacweyn ka qabaa nidaamka diiwaangelinta Doorashooyinka soo socda gaar ahaan qodobada odhanaaya “ Codbixiyuhu waxa u ka codayn karaa oo kaliya goobta uu iska diiwaangeliyey”. Waxaana uu ka codsanayaa Golayaasha Sharcidejinta in ay wax ka bedelaan qodobadaas, isla markaana xeerarka dalka la waafajiyo hab-dhaqanka iyo duruufaha dadka reer guuraaga ah. Siilaanyo waxa u ogyahay in qaybta ugu wayn reerkiisu ka qaatay dowlada iyo Guurtidaba. Haddii la qaado “ one man one vote” wuxuu ogyahay reerka u ka soo jeedi in aanu kolaba ka helayn 12 xubnood iyo gudoomiye Guurtida Umada, dowladana 5 waziir. Sidaasi owgeed waa in u ka soo horjeestaa doorasho xalaalihi in wadanka ka dhacdo. Umadu haddii ay sidaas wax u ogtahay waa in ay garataa in an ka soo daalay dagal shisheeye iyo ku sokeeyaba oo an diyaar u nahay doorasho nabad iyo nafiifba ah cidii doontiba ha ku guulaysate, war xumu tashiilkana ay ka cowdibilaystaan.
DIGNIINAHA IYO TALOOYINKA AY KU QARSOOTAHAY HANJABAADU
Warfaafinta Somaliland iyo kuwa debeduba waxay sheegayaan in Somaliland ay khatar ku jirto. Iyaa geliyey doodaas? Siilaanyo warbixintii u la yeeshay Aljazeera wuxu sheegay in mustaqablka wadanku u mugdi galayo, isla markaana Somaliland noqonayso dal guul daraystay haddi aan doorasho laga qaban dalka. Siilaanyo wuxu ku tala jiro ee ku dheehan hadaladiisa dadku ma fahmay, isgu doorashana maaha. Doorashada uu rabi maaha ta umada rabto ee waa ta lagu soo heshiiyey Garadag. War xumo tashiilku waxa uurka ugu jira ayuu sheegaya (Pessimism never comes out of the Blue). Somalidu waxay ku mahmaahdaa TIMIR LAFBAA KU JITRA. Umadu ha iska baandhayso ujeedooyinka madmadowgu ku jiro ee ay ku hadaaqayaan ee ay malo awaalyaan Madaxda Kulmiye.
Dhinaca kale Gaboose wuxu khudbad u jeediey Komishanka cusub. Wuxuu yidhi in kasta oo anay xaalad adag oo garowsiyo mudan la soo darsin dalkeena, haddana doorashadii madaxtooyada dhowr jeer ayay dib u dhacday taas oo abuurtay xasarad siyaasdeed iyo kacdoon dadweyne oo sababay in uu dhiig ku qubto wadooyinka Hargeysa. Waa run in ay kacdoono dhaceen. Waa run in dad ku dhinteen Hargeysa. Wuxuu Gaboose ku xad gudbay uu meel kaga dhacay aragtida and iyo maskaxda dadweynaha Somaliland. Ayaa abaabulay kacdoonadaas? Ayaa loo haystaa dilkaas ka dhacay Hargeisa? Waxa hubaal ah intaydoontaba ha qaadate e in helo doono dadkii mu’aamaraayada maleegay.
XAALAD ADAG OO GAROWSIYO MUDANI LAMA SOO DARSIN DALKEENA!!!!
Gaboose waxay ahayd in u dadka ka raali geliyo dibaatooyinka isaga iyo madaxda kale ee Kulmiye ku keeneen umada intaa u ka afeef dhiganaayo waxayaabaha ay samayn doonaan ama ay ku tala jiraan. Waxaan wada ognahay in dhibatooyin garowsho badan mudani ina soo mareen. Waxa dhacay dhacdooyin hadda ka horow ina soo marin. Waxay ahayd in u ka hadlo wixii sababay in dad la dilo, dadna la gowroco oo la googooyo, in kalana la rasaaseeyo. Argagixisooyinkaasi miyayna ahayn kuwa garowsho mudan? Miyayna ahayn madaxda Kulmiye in ay umada ka raali geliyaan lana raadiyaan dadkii falalkaas gaystay? Waxan u malaynayaa in ayna u baahnayn in la maleeyo dadkii dilalkaas gaystay iyo dadka taageerada ka gaystayba.
Waxay ka afeef dhiganayaan maaha doorasho dhiciwayda ee waxay dadweynaha u sheegayaan in madaxda Kulmiye diyaar ayna u ahayn in ay aqbalaan natiijada darooshada soo socota oo ay isku diyaarinayaan dagaal. Waxay sahadiniyaan ilaahay ha ina garamariyo, Amiin.
This entry was posted on November 22, 2009 at 3:49 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.